Utyalo-mali kuTyalo-mali kunye noLungiso loMatshini -Ukubuyiselwa kwistroli
Izixhobo zoomatshini bokutya
Yenza ingxubevange yezahlulo zentsimbi
Icandelo lonyango lomphezulu
Inkampani ye-Retool inamava phantse ama-26 eminyaka ekubunjweni ngokuchanekileyo iya kukuzisela ukhetho, ukunceda, kunye neendleko zokukhuphisana.
Inkampani yeRetool inyanzelisa uphuhliso lwenzululwazi njengenkuthazo, umgangatho kunye nokulunga njengomthombo oya phambili. Kudala sifuna ukuma ngetyala okugqwesileyo, umgangatho wehlabathi kunye nenkonzo yeprimiyamu. Sinqwenela ukusebenzisana nabahlobo bamanye amazwe nabasekhaya kunye nokwenza ikamva elihle.
Sinokuphosa kunye nomatshini iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso ngokwemizobo okanye iisampulu zabathengi zokubonelela ngokuchanekileyo ukuphakama, kwaye umgangatho uzinzile.
Inkampani yeRetool liqabane elithembekileyo kushishino lokuphosa. Sisebenzisa le ntembeko kwaye sisebenzisa ulwazi lwethu ukuthelekisa iimfuno zakho zokuphosa. Iinjineli zethu zinamava kuwo onke amacandelo eshishini lokuphosa. Sisoloko sinika eyona nto iphambili esemgangathweni kwaye siyilawula ngokungqongqo yonke inkqubo yemveliso ngokwe-ISO9001.
Ukujija oomatshini bokusila inyama
Izixhobo zeGenerator yamandla
Shijiazhuang Retool Stainless Iimveliso Co., Ltd. esekwe ngo-1994Retool indawo e Xinzhaidian Area Area, Shijiazhuang isixeko, kunye nokuthuthwa lula kunye indawo ophezulu. Inkampani yeRetool igxile kuyilo nakwenziwa kwazo zonke iintlobo zevalvu kunye nokuveliswa kweendawo zokuphosa imali kunye namalungu oomatshini.
Inombolo ye-3 Mingzhu Road, i-Xinzhaidian Area Area, iZhaoxian, Shijiazhuang, China